Daawo Sawirada: Shir horudhac u ah Shirweynaha Gobolka Gedo oo ka dhacay Magaalada Garbahaarey. – idalenews.com
Daawo Sawirada: Shir horudhac u ah Shirweynaha Gobolka Gedo oo ka dhacay Magaalada Garbahaarey.
Magaalada Garbahaarey, ayaa waxaa shalay lagu qabtay kulan loogu gogol xaaraayo, shirweyne ballaaran oo billaha soo socdo lagu wado in uu ka qabsoomo Gobolka Gedo.
Shirweynaha lagu qabanaayo Gobolka Gedo, ayaa waxaa looga arrinsan doonaa aayaha iyo musqabalka beelaha ku wada nool Gobolkaasi, loona midayn lahaa beelaha ood wadaagta ah ee ku dhaqan Gedo.
Kulankaan, ayaa waxaa ka soo qaybgalay Odayaasha Dhaqannka, Culima’udiinka, Waxgaradka iyo Dhalinyarada Deegaanka, waxaana looga hadlaayay qaabkii loo wajihi lahaa shirweynaha ka dhici doono Gobolka Gedo.
Gedo waxay ka mid tahay Gobolada Soomaaliya ee uu sida weyn u saameeyay dagaaladii sokeeye ee dalka halakeeyay, wuxuuna soo maray marxalado kala heer ah.
Gobolka Gedo, ayaa waxa uu juqraafi ahaan uu dhacaa Koonfur Galbeed Soomaaliya, wuxuuna deris la yahay Gobolada Bakool, Baay iyo Jubbada Hoose. Waxaana mara labada Webi ee kaliya ee Soomaaliya mara (Shabelle iyo Jubba).
Sanadkii tagey Gobolka Gedo waxay Dowladda Soomaaliya ku dartay Gobolada Maamulka Jubba uu ka arrimiyo, inkastoo dadka reer Gedo ay ku doodayaan inaanay jirin cid iyaga u mataleysay shirkii Addis Ababa (25, August, 2013).
Idale News Online, Garbahaarey.
Munaasabad lagu Xasuusanaayo Weerarkii Maxakamada Gobolka oo Muqdisho lagu qabtay.
Dr.Maxamuud Cali Shire Oo ah wasiirka Howlaha Guud Ee Dowlad Goboleedka KG Soomaaliya oo si Adag u Weeraray Safarka Ra”iisul Wasaare Cabdweli ee Kismaayo.